Ragoow Afartaan Astaan Dumarka Leh Guur ma galaan ! (Sirta Nolosha) - Galmada.net
Ragoow Afartaan Astaan Dumarka Leh Guur ma galaan ! (Sirta Nolosha)
Waxaa jira ninyahoow arimo badan oo ay haboon tahay in aad wax ka ogaato ka hor inta aadan guur sameyn oo aad il gaar ah isaga yeelato haweenka tilmaamahaan leh .
* Haweeneyda U Dhaqanta Sida In Ay Nin Tahay : haweeneyda waxa ay ku qurux badan tahay haweenimadeeda ogoow ragga kama helaan haweenka jecel in ay sameeyaan wax waliba oo ninka uu sameeyo oo qaabka ay u dhaqmeyso aad moodo in ay nin tahay .
* Midda Madaxa Adag : waa mid mar waliba isku dayda in ninkeeda ku qanciso afkaaro qaldan , waa mid aan aqoon mahad celinta oo ay adag tahay in la qanciyo.
* Midda Neerfoosaha Ah : waa mid xanaaqeeda dhaw yahay wax yar ayay hawada ku galeysaa , waa mid marka ay xaanaqdo dharkeeda ku qamaameysa iyo in wajiga iska dharbaaxdo isla markaana nasiibkeeda wax ka sheegeysaa sirhufaN waxa ay ku leedahay haddii nin aad u dul qaad badan tahay oo awooda in uu dajiyo dhib kuma jirto in aad wax la wadaagto midda tilmaamahaan leh .
* Midda Diinta Yar : waa mid aan dan ka laheyn arimaha diinta , waxa ay soo bandhigtaa quruxdeeda oo bananka ayay keenya, ragga ayay u qososhaa haddii la wacdiyana waxa ay ku leedahay Iimaanka Qalbiga ayuu jiraa .
Daawo gabar kale oo isa soo qaawisay si ay caan u noqoto NAASAHA BANAANKA